Wararka Maanta: Arbaco, Oct 16, 2013-Ra’iisul Wasaarha Somalia oo sheegay in Wadashaqeyn Wanaagsan ay kala shaqeyso Golaha Baarlamaanka Soomaaliya
Mudane Saacid ayaa sheegay inaysan kala kulmin baarlamaanka muddadii uu xafiiska joogay wax caqabad ah, isagoo intaas raaciyay in 25 hindise iyo shan heshiis ay u gudbiyeen baarlamaanka.
“Waxaan halkan ka qirayaa in baarlamaanka iyo xukuumadda ay u dhexeyso wada-shaqeyn wanaagsan, waxaana halkii sano aan u gudbinnay 25 hindise sharciyeed iyo shan heshiis, dhammaantoodna waxay u meel-mariyeen si ay u ku jirto kalsooni buuxda iyo shaqo wanaag,” ayuu yiri ra’iisul wasaaraha Soomaaliya.
Sidoo kae, ra’iisul wasaaruhu wuxuu sheegay in xukuumaddu ay ku kalsoon tahay wadashaqeynta kala dhexeysa baarlamaanka, isagoo sheegay inay u gudbin doonaan sannadka soo socda mooshinno iyo heshiisyo kale oo intaas ka badan.
“Baarlamaanku wuxuu muujiyay shaqo wanaag hufan, waxaana inagu diyaar u nahay inaan ula shaqeyno si wanaagsan, tanina waxay caddeyn buuxda u tahay in xukuumaddu ay diyaar u tahay in lala xisaabtamo” ayuu ku daray hadalkiisa.
Ra’iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa hadalka ka sheegay kulan qado-sharaf ahayd oo shalay ka dhacay xarunta madaxtooyada Soomaaliya, isagoo intaa ku daray inuu ku faraxsan yahay howlaha dowladda Somalia u qabsoomay intii ay jirtay, uuna shaqo intaas ka wanaagsan u rajeynayo sannadaha soo socda.
Dhanka kale, ra’iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa waxaa lagu wadaa inuu 26-ka bishan Oktoobar hortago baarlamaanka Soomaaliya si uu khudbad uu ku sharraxyo wax-qabadka xukuumadiisa sannadkii lasoo dhaafay.